I-china 42 Bi-Metal Hole saw ngenkuni yensimbi, How saw, Gypsum Board Plastic Iron Plate Hole Saw, Metal Wood drill, matel drill ifektri abakhiqizi | Boda
42 Bi-Metal Hole isaha yokhuni lwensimbi, How saw, Gypsum Board Plastic Iron Plate Hole Saw, Metal Wood drill, matel drill
I-BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Opener / i-BI-Metal Hole Saw igqoke ukumelana okuqinile ekusebenzeni, ngensimbi ebukhali nangoketshezi olubushelelezi kanye nokusebenza okulula. Ngesikhathi senqubo yokusebenza, amazinyo abukhali nokudlidliza okuncane okungenza ngempumelelo ibhalansi lapho kubhola izimbobo nezitebele zokusebenza. Idizayini entsha yokuphuma kwe-chip groove ingenza okusanhlamvu kususwe ngokushesha futhi kwenze umsebenzi ubushelelezi futhi ubelula. Imikhiqizo yenzelwe ukusebenziseka kalula.
IBOSENDA Bi-Metal Hole Saws ithengiswa umhlaba wonke, ngamakhasimende avela e-US, Canada, Australia, Germany, Britain, Spain nase-Eat European Countries afana neGeorgia, iRussia kanye namazwe aseNingizimu Melika afana neBrazil, Mexico, Chile , Colombia njalonjalo, emazweni asempumalanga Ephakathi afana ne-Iraq, Dubai, Saudi, Qatar, Amen nokunye ....
Amasaha emigodi yaseBOSENDA ajabulela impendulo emakethe enhle futhi amakhasimende abeka ama-oda ajwayelekile. Ikhwalithi nobude bempilo yamasaha emigodi kuhlala kuthokozelwa ukuphawula okuhle. Amasaha emigodi yaseBOSENDA angasetshenziswa ekusetshenzisweni kwezimboni, efanelekile kuyo yonke indawo yokwakha.
Ama-Hole Saws anendawo yokugaya yesikhungo, ebekwe ngokunemba kakhudlwana, ngomphumela obukhali, konke lokhu kwenza isipiliyoni esisebenziseka kalula kanye nokonga abasebenzi ngesikhathi sokusebenza.
I-BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Saws / Steel Hole Saws / Metal Drill enosayizi kusuka ku-14-300mm, impahla engu-M42, efanelekile ukuvula izimbobo ngensimbi yensimbi, ukusakaza, i-aluminium alloy nezinye izinto zokufaka ipayipi lensimbi, ipuleti lepulasitiki, zonke izinhlobo zokhuni ibhodi le-gypsum nezinye izinto.
Uketshezi lwangaphandle lokupholisa lungcono ukungezwa kulo lapho kubhola okokusebenza kwensimbi. Uma kwenzeka noma ikuphi ukuma okumile okwenziwe yizinto zodoti ngesikhathi sokusebenza, kuyadingeka ukumisa ukusebenza kuqala bese uqhubeka nokusebenza ngemuva kokukhipha imfucuza.
Ungasebenzisi amandla amaningi lapho uqaqa futhi uhlanganisa izikulufo. Lapho kubhola izimbobo entweni ngosayizi ongaphezu kwe-10 mm, kuyadingeka ukuthi ususe intwasahlobo ekubunjweni kokuma.
Ama-Bi-Metal Hole Openers / ama-Hole Saws / ama-Bi-Metal Drill asetshenziswa kakhulu kuzo zonke izinhlobo zebhentshi, umshini wokubhola kanye ne-electric hand drill.
Osayizi bomkhiqizo banje:
15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 42mm, 45mm, 50mm, 53mm, 55mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm, 180mm, 185mm, 190mm, 195mm, 200mm, 48mm, 6 * 68,205mm, 210mm, 215mm, 220mm, 225mm, 230mm, 240mm, 245mm, 250mm, 255mm, 260mm, 270mm, 275mm, 280mm, 285mm, 290mm, 295mm, 300mm.
Langaphambilini Ukhonkolo wesimbobo somgodi, izingcezu zomgogodla oyisisekelo, isaha lomgodi, isaha lomgodi wodonga, umgxala kakhonkolo
Olandelayo: Idayimane lengilazi le-ceramic saw, ingilazi yokubhoboza ingilazi, ingilazi ye-holw saw, i-glass tapper, i-ceramic hole saw, i-marble hole saw